कालीञ्चोकमा हिउँ खेल्नेको धुँइचाेः कसरी पुग्ने कालीञ्चोक ? हेर्नुहाेस् फाेटाेफिचर र भिडियाे सहित - imandarkhabar
कालीञ्चोकमा हिउँ खेल्नेको धुँइचाेः कसरी पुग्ने कालीञ्चोक ? हेर्नुहाेस् फाेटाेफिचर र भिडियाे सहित
काठमाडौं,दर्जनौँ हिमालका समिपमा रहेको कालीञ्चोक धार्मिक दृष्टिले मात्र नभई प्राकृतिकरुपमा पनि मनोरम छ । समुद्र सतहबाट तीन हजार ८४२ मिटरको उचाइमा रहेको दोलखा जिल्लाको कालीञ्चोकमा यतिबेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड बाक्लोे छ ।
काठमाडौँबाट कालीञ्चोक आएकी रमिता रेग्मी भन्छिन्, “नजिकैबाट आजसम्म हिउँ देखेको थिइन् । हिमपात भयो भन्ने समाचार आउने बित्तिकै साथीहरु मिलेर घुम्न आएका हौँ । हिउँसँग खेलेर अघाएपछि कालीञ्चोक भवगतीको दर्शन गर्ने र फर्कर्ने योजना छ ।”यस्तै रामेछापबाट कालीञ्चोक आएका पदम कार्की भन्छन्, “हिउँनै हिउँको पहाड हेर्न र खेल्नकोे लागि कालीञ्चोक आएको बताउँछन् । उहाँ भन्नुहुन्छ आँखै अगाडि यतिधेरै हिउँमा रमाउन पाएको पहिलोपटक हो ।”
यसको लागि नेपालीले प्रतिटिकट रु ५०० तिर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकको लागि भने २५ प्रतिशत छुट छ । कुरीबाट कालीञ्चोक मन्दिरसम्म हिँडेर जानको लागि एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्दछ ।
Previous article‘माता’को भर पर्दा काठमाडौंमै बालिकाको ज्यान गयो
Next articleमाघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय